श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्माले आफ्नो जन्मदिन मनइन ,को को सहभागी भए त ? – Nepali Taja Khabar
नायिका सुष्मा कार्कीको हिज ज’न्मदिन परेको छ। १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको ज’न्म भएको थियो। बर्दिया जिल्लामा ज’न्मिएकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’
यो पनि हेरौ !!!
नायिका श्वेता खड्काले माझी बस्तीबाट हात झिकेकी छन् । श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले५३ घर माझीका लागि एकीकृत बस्ती बनाउन लागेकी थिइन् ।
२०७४ जेठ १५ बाट उनले निर्माण सुरु गरेकी थिइन् तर, हालसम्म सो बस्ती निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन । सोही समयमा बस्ती निर्माणमा जुटेका कलाकार तथा समाजसेवी सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण सकेर चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा जुटिसक्दा उता स्वेतले भने हात झिकेपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकी उनले करोडौँ खर्चेर विवाह र पार्टी गरेको तथा एक क्लवमा भएको झगडामा उनको उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
एकीकृत माझी बस्ती निर्माणको १५ जेठ २०७४ मा शिलान्यास गरेकी उनले नसकिदै बस्ती निर्माणबाट उनले हात झिकिसकेको खुलेको छ । निर्माण सम्पन्न नभएको माझी बस्ती ऋणमा डुबेको भन्दै यही माघ २० गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट नायिका श्वेताले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा अपील गरेकी थिइन् ।
पुण्यलाई विनयजंगले फोन गरेर सपनालाई सि’ध्या’ई’दि’ने भनेपछि पुण्यले मिडियामा गरिदिए सार्वजनिक (भिडियोसहित)
प्रचण्डले ओलीलाई भने- तपाईंले लडाइँ हार्नुभयो, भित्तामा पुर्‍याइदिन सक्छु
‘हामीलाई सि ध्या उँछु भन्ने प्रचण्ड आफै सि द्धि नुभयो’
मुख्यमन्त्री राईको उत्ताउलो शैलीः सयौंको भीडमा होली खेलेर सरकारी निर्णयलाई चुनौती